Printer Rudzi rweVatengi uye Fekitori - China Printer Rudzi rweVagadziri
Rolll Kutenderera Karenda Heat Press Machine
Akangwara Kudzora Jersey Calandra Isa Heat Press ...
1.7m Hupamhi Kendendende Fabric Heat Transfer Transfer Machine
Mucheka Roller Heat Press Machine
Kutenderera Kuisa Ribhoni Yekupisa Press Machine
70 × 90 Big Size Jersey Sublimation Double Worktable H ...
Dhijitari Inodhindwa Powder Pet Dhinda Firimu DTF Printer
Iyi 70cm inkjet purinda inozivikanwa kushandiswa mune nguvo maindasitiri mutsetse, kune marudzi maviri einki ako aunosarudza.
1. Eco solvent ink: shandisa iyi inki ndeyekudhinda pane kupisa kupisa vinyl, iwe unoda vinyl cutter muchina kuti ushande pamwe chete, inova iyo contour kutema dhizaini, uye kupisa kupisa pahembe.
2.Machira pigment inki: iyi inki ine CMYK uye chena ruvara, yakanyatso kudhinda paCentrifugal firimu, uye shanda nemuchina wedust kuti ushande, wobva wapisa kupisa dhizaini pane nguvo, hapana chikonzero chekushandisa iyo vinyl cutter. iyi tekinoroji nyowani, Inochengetedza vashandi uye maitiro akaomarara, zviri nyore kushandisa.
Kuita kwemafuta anodziya: Kwakanyanya kupisa Kutamisa Kushanda, kugadzikana kwakanaka kwekushisa, kugona kwakanyanya kupisa uye coefficient of thermal conductivity. Nekudaro, mafuta anopisa anozoitika Chain kutsemuka betw ...